Galmudug oo shaacisay inuu burburay wadahadalkii ay la lahaayeen Ahlu-sunna (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Galmudug oo shaacisay inuu burburay wadahadalkii ay la lahaayeen Ahlu-sunna (AKHRISO)
Maamulka Galmudug ayaa shaaca ka qaaday inuu gebi ahaan bur-buray wadahadalkii ay magaalada Muqdisho kula lahaayeen Ahlu-sunna Waljameeca, kaas oo ay garwadeen ka aheyd dowladda federaalka Soomaaliya.
Guddoomiyaha guddiga wadahadalka maamulka Galmudug ahna wasiirka dastuurka iyo dib u heshiisiinta Cismaan Maxamed Cali oo goordhaw shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in lagu guul dareeystay wadahadalada ay xarunta madaxtooyadda kula lahaayeen Ahlu-sunna Waljameeca.
Wuxuu guddoomiyaha sheegay in dhinaca Ahlu-sunna Waljameeca ay wax ka socon waayeen, sidaasi awgeed wixii haatan ka dambeeyo, la guddo gali doonno doorashada xilka madaxweynaha Galmudug, taas oo dhici doonto 30-ka bishaan April.
Sidoo kale, guddoomiyaha ayaa sheegay in ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre uu marar badan isku dayay in wadahadalada labada dhinac natiijo fiican laga gaaro balse ay ka dhego adeegeen Ahlu-sunna, kadib markii shuruudo aan macquul ahayn ay la yimaadeen.
“Wadahadaladii waa istaageen, dhowr kulan oo aan galnay annaga iyo dowladda waxaan isla gaarnay meel fiican, balse Ahlu-sunna ayeey wax ka socon waayeen, oo la timid shuruudo aan macquul ahayn” Sidaasi waxaa yiri Cismaan Maxamed Cali.
Si kastaba ha ahaatee, fashilkaan ayaa loo sababeeynayaa inay ka dambeysay kadib markii Ahlu-sunna ay la timid shuruudo dhowr ah, iyadoona shuruudahaasi ay ka mid ahaayeen in Galmudug ay marka hore kusoo biirto maamulkooda, in xubno badan ay ku yeeshaan baarlamaanka Galmudug iyo shuruudo kale oo Galmudug u cuntami waayay.